Ungayihlanganisa Kanjani Isu Lakho Lokuqukethwe Nemikhankaso Yezokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
NgoLwesine, ngoMashi 28, 2013 NgoMsombuluko, Juni 10, 2013 I-Jayson DeMers
Ubudala Becebo Lokuqukethwe
Yinkathi yokuthi “isu lokuqukethwe”Kanye“ nokukhangisa okuqukethwe. ” Noma ngabe uphendukela kuphi, kaningi, leyo yinto ozoyizwa. Eqinisweni, okuqukethwe bekuyingxenye esemqoka yokukhangisa ku-inthanethi kusukela ezinsukwini zokuqala zokwenza kahle izinjini zokusesha. Ngezibuyekezo zakamuva ze-Google algorithm, noma kunjalo, njenge IPanda nePenguin, isu lokuqukethwe eliqinile selibaluleke kakhulu.
Okuqukethwe okunophawu kusebenza izimangaliso ezinkampanini eziningi, futhi asikhulumi nje ngokuqukethwe kwamawebhusayithi lapha. Sibheke okuqukethwe okwenziwe ngobuciko, okuhlanganiswe ngobuciko, nokuhloselwe-ezenhlalo-okuhle okwenza izinto zenzelwe imikhiqizo emikhulu nosomabhizinisi abancane ngokufanayo.
Isu lokuqukethwe liyaphila futhi likhahlela amawebhusayithi. Kubhekwa kakhulu izindatshana zebhulogi ze-SEO, kepha abantu abaningi engibabonayo - abantu ababambe iqhaza ezinkundleni zokuxhumana - abahleleli isu lokuqukethwe leziteshi zabo zenhlalo. Ngaphandle kokuthi abantu bavame ukubheka imithombo yezokuxhumana njengongenakho okwehlukile, okuqukethwe okuhlanganisiwe (okususelwa enkolelweni yokuthi imithombo yezokuxhumana "yokwabelana" okuqukethwe okutholakala kwenye indawo), kungasebenza izimanga kunoma yimuphi umkhankaso / umzamo wezokuxhumana.
Isu Lokuqukethwe Lemidiya Yezokuxhumana? Uyadlala?
Ukubandakanya isu elihle lokuqukethwe lamawebhusayithi kunzima ngokwanele; Ngemuva kwakho konke, kuthatha izinsiza eziningi ukudala ukuhlelwa kokuqukethwe kwebhulogi elula. Kungani umuntu angafuna ukuchitha isikhathi (futhi mhlawumbe nemali) ukuze okuqukethwe kungene ezinkundleni zokuxhumana? Angithi nje sizokwabelana ngezixhumanisi nezithombe?
Ingxenye enkulu yomkhankaso wakho wezokuxhumana kufanele ube nokwabelana ngokuqukethwe okuthokozisayo nokuhambisanayo, ukuthumela ama-status noma ama-tweets asiza abasebenzisi, ukubandakanya abafundi / abalandeli, njll. Okuqukethwe kulokhu ikakhulukazi "kutholakala," kepha ukwethula kanjani futhi nini izindaba. Kunenani elifanele lecebo elibandakanyekile; futhi ngaphandle kwamasu nje, kukhona "isu lokuqukethwe" noma imithombo yezokuxhumana. Izinto ezintathu zibaluleke kakhulu ukuthi imikhankaso yakho yezokuxhumana isebenza kahle kanjani:
Okuqukethwe kwemithombo yezokuxhumana akuhloselwe nje ukuqoqa izimpawu zomphakathi kweGoogle, yize lokho kubaluleke kakhulu. Akugcini nje ngokushayela ngokuchofoza, noma. Ngaphezu kwakho konke, ungasebenzisi nje isu lokuqukethwe ukuze ube nekhasi “elisebenzayo” lezokuxhumana.
Imithombo yezokuxhumana kufanele iqhube ukuzibandakanya. Lokhu kukhulisa ukuqwashisa komkhiqizo, ukuthandwa, nokwethembana. Konke lokhu, akumangazi, kuya ngecebo lakho lokuqukethwe kwezokuxhumana.
Lithini Isu Elihle Lokuqukethwe leMidiya Yezokuxhumana?
Incazelo yokulunga ingahluka kakhulu. Yize kulula ukusho ukuthi kuya nge-niche / imakethe okuyo bese uyishiya lapho, kunemibono ethile eyisisekelo kepha ebucayi esebenza kumasu amaningi ezokuxhumana:
Hlela futhi ushicilele okuqukethwe okuhambisana kakhulu "MANJE": Abantu bavame ukuqoqa inqwaba yezixhumanisi bese bezihlela ngamawebhusayithi okuphathwa kwezokuxhumana nabantu njengeI-Hootsuite noma i-Buffer. Yize lokhu kulungile, qiniseka ukuthi okuqukethwe owabelanayo akugcini ngokuhambisana kepha futhi futhi kungokwamanje kakhulu.
Zenze zibe mnandi: Kuyisidina, okuthunyelwe ngomugqa owodwa okunesixhumanisi esifushane ngeke kudonse abalandeli bakho. Kumasayithi afana ne-Facebook ne-Google +, engeza izithombe ezifanele kokuthunyelwe kwakho. Lokhu kubenza bagqame futhi kudonse amehlo abantu. Izisekelo eziyisisekelo ze- Ukunakwa-Inzalo-Isifiso kusebenza kulokho okufaka ezinkundleni zokuxhumana. Futhi ungakhohlwa okokugcina: Isenzo! Sebenzisa njalo ukubizelwa esenzweni.
Bhala izihloko nezincazelo ezihlukile, ezicacile, ezilula, kodwa kazibuthe. Isiteshi ngasinye senhlalo sinabantu abahlukile noma isitayela sokuzibandakanya. Ku-Facebook, abantu ikakhulu abazibandakanyi ngamazwana (esikhundleni salokho, “ukuthanda” kumayelana nokuthi bafinyelela kuphi, kokuningi okuthunyelwe). Ku-Twitter, ukubandakanyeka kungajula kancane, ngokusebenzisa izimpendulo kanye nezimpendulo. Ngibone umphakathi we-Google + uhlanganyela kakhulu kunakwenye indawo. Kepha kuya ngokuthi ukufometha kanjani okuthumela ngaphezu kwalezi ziteshi zomphakathi.
Qonda ukuthi imithombo yezokuxhumana akuyona eyokuthumela izixhumanisi kuphela: Akuyona iDigg, ngemuva kwakho konke. Awukho lapho ozothumela izixhumanisi bese uqhubeka. Kumayelana nomzamo osebenzayo wezokuxhumana ukudala ukuzibandakanya. Uma ukwazi ukubandakanya abasebenzisi bakho - bathole ukuthi babelane, babhale kabusha, baphendule, babeke amazwana noma baqale ingxoxo lokho kudonsela entweni yegciwane - ungasho ukuthi imizamo yakho yezokuxhumana izuze.
Imithombo Yezokuxhumana Isandiso Sakho / Sebhizinisi Lakho / Iwebhusayithi Yakho
Imithombo yezokuxhumana ayiyona - futhi ayikwazi - ukuba yinhlangano ekhethekile eyehlukile kubhizinisi / kuwebhusayithi yakho. Uma wakha iwebhusayithi, futhi uzama ukuyilungiselela ithrafikhi nokuguqulwa, udinga ukuqinisekisa ukuthi imizamo yakho yezokuxhumana nabantu ayisebenzi.
Ngokwenza "imizamo yezokuxhumana," angikhulumi nje ngokudala iphrofayili esebenzayo yezenhlalo enabalandeli abaningi, abalandeli, nokuthandwa okuhambisanayo. Engikhuluma ngakho impela ngukuthi:
amazinga athembekile wokuchofoza
ukuguqulwa okuvela eziteshini zomphakathi
ukufundwa kanye nomgwaqo
amathuba aphezulu amasheya, izimpendulo, kanye ne-viral factor ephezulu
Imikhiqizo emikhulu isebenzisa imithombo yezokuxhumana nge-ROI eqhumayo. Okuqukethwe okunophawu kushesha kuba ileveli elandelayo yokukhangisa okungabonakali - futhi uqagele ini? It is ukusebenza. Futhi ngemuva kwayo yonke isu lokuqukethwe eliqinile elenzelwe ngqo iziteshi zemidiya yokuxhumana nabantu.
Ngena ku-bandwagon ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka ngoba nakanjani kuzoba nzima (empeleni, sekuvele kunjalo) ukusungula izwi lakho phakathi kwawo wonke umsindo.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweisu lokuqukethweukusebenzisa ngokugcwele injiniseosocial mediaSocial Media Marketing